Hehy - Pejy fandokoana ho an'ny ankizy
Hoy ny ondry manodidina ny mpamono bozaka: "Mäh!"
Hoy ilay mpamaky bozaka amin'ny ondry: "Tsy avelako hanafatra na inona na inona ianao!"
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. Aogositra 2021 5. September 2021 Sokajy hatsikanaKeywords sariitatra, hatsikana, lachen, Lustig, JokesLeave a Comment mampihomehy - Hoy ny ondry amin'ny mpamaky bozaka
Ny tsara indrindra amin'ny Denglish
Betsaka ny tranonkala misy an'ity fandikan-teny iniana diso ity amin'ny fiteny anglisy. Saingy nampisavoritaka loatra anay izany. Antony ampy ahafahanay manangona fandikan-teny mampihomehy ny tenanay ary manao izay tsara indrindra azo alaina manaraka ny abidia:
Ny akoho jamba koa mahita voam-bary indray mandeha
Soavaly manan-talenta mijery iray tsy ao am-bava - tsy mijery soavaly fanomezana eo am-bava ianao
Izay nianatra indray - nianatra zavatra indray
Ny mahita indray dia mahafaly
Akatona ny varavarankely, misarika toy ny lasopy moka izy io! - Akatona ny varavarankely, misarika toy ny lasopy moka izy io!
Tonga ny fotoana, tonga ny torohevitra
Vidio izay tadiaviny - vidio izay tadiaviny
Aza mangataka masoandro - aza mangataka masoandro
Aza milalao ny saosisy voa manafintohina - aza milalao ny saosisy voa manafintohina
Ankafizo ny fiainana anaty lamasinina feno - Ankafizo tanteraka ny fiainana
Mandeha malalaka ny fitoviana - manomboka izao
Miaina fahagagana manga - miaina fahagagana manga
Aza manome toy izany
Tokony hisakafo izy - eo amin'ny latabatra izy
Tsy nanao na inona na inona avy tamin'ny vovoka izy, tsy niraharaha ahy izy, tsy ho anao
Lanitra, boriky ary kofehy! - Lanitra, boriky ary kofehy!
Eto no mandeha ny mailaka - Eto no maty ny mailaka
Holla, ilay hazo hazo - Holla, angano ala
Izaho dia foxdevilswild - amboadia devoly bibidia aho
Mavesatra amin'ny tariby aho - mavesatra amin'ny tariby
Tonga krizy aho
Mino aho fa mijirika
Mino aho fa mitsoka kiririoka
Afaka mihira hira momba izany aho
Tsy hitako ny ala manoloana ireo hazo mafy kokoa - Tsy hitako ny ala amin'ireo hazo
Tafalatsaka amin'ny rahona rehetra aho
Fantatro ny fomba fihazanan'ny bitro - fantatro ny fomba fihazanan'ny bitro
Fantatro aho eto - fantatro ny lalako manodidina eto
Mampihomehy ahy tapaka aho
Tsy maintsy manao buffalo aho rahampitso, tena kely tokoa - tsy maintsy manao buffalo be aho rahampitso
Mieritreritra aho fa hala aho - mieritreritra aho fa mihodina
Fiaran-dalamby ihany no azoko
Tsy tsara ny mihinana serizy miaraka aminao
Jack Steam amin'ny arabe rehetra - Jack Steam amin'ny arabe rehetra
Aza atao aho
Ataovy ny lalitra
Tsy afaka tonga amin'ny rano aho
Maty ny aiko ny fiarako
Ny teny anglisy-ko dia eo ambanin'ny kisoa rehetra - ny English-ko dia eo ambanin'ny kisoa rehetra
Ny kliobako mpihira mahafinaritra
Tsy dia mianjera amin'ny varavarana mankao an-trano
Izao ny lafaoro fa efa nivoaka
Manana salady isika izao - Manana salady isika izao
Ankehitriny dia mipetraka tsara tarehy ao anaty ranomainty isika
Tsy ny tsaramaso no mahaliana ahy
Izany no mahatonga ahy tsy ho olona haingana aorian'izay
Misy mihomehy eny ny akoho - tafontrano mihomehy eny ny akoho
Lasa eny ilay alika ao anaty lapoaly adala. - Ny alika ao anaty lapoely dia lasa adala.
Inona ary izany raha ho an'ny ranom-boankazo? - Karazana fivarotana ranom-boankazo inona ity?
Mavesatra eo amin'ny ala ianao. - Sarotra amin'ny lalan-diso ianao.
Entinao amin'ny rofia aho
Toa vendrana ianao avy eo amin'ny fanasan-damba
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 14. Jona 2021 5. September 2021 Sokajy hatsikanaKeywords Denglish, hatsikana, Lustig, JokesLeave a Comment mankany amin'ny Best of Denglish